I-Kashmir yemukela izivakashi emuva njengoba iseluleko sokuhamba sisusiwe
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ukuphepha » I-Kashmir yemukela izivakashi emuva njengoba iseluleko sokuhamba sisusiwe
UJammu kanye noMbusi waseKashmir uSatya Pal Malik
I-India I-Jammu ne-Kashmir Umbusi uSatya Pal Malik namuhla uyalele ukuthi ukululekwa kwezohambo ukucela izivakashi ukuthi zihambe esigodini ukuze ziphakanyiswe ngokushesha.
"Lokhu kuzokwenziwa kusukela ngo-Okthoba 10," kusho uMbusi, ephawula ukuthi ukususwa kweseluleko sezokuvakasha kungesinye isinyathelo esikhulu sokubuyela esimweni esijwayelekile eJammu naseKashmir.
Ngaphambi kokuhoxiswa kwesimo esikhethekile, abaphathi beJammu kanye neKashmir bakhiphe iseluleko sezokuphepha becela abahambi base-Amarnath kanye nezivakashi ukuthi bahambe eKashmir, besho usongo lwamaphekula.
Uhulumeni wezwe ubelokhu ephakamisa kancane kancane imigwaqo kanye nokuvalwa kwendawo esigodini saseKashmir, ebeka usuku ngaphambi kokuhoxiswa kwesimo sakhe esikhethekile.
I-Hawaii Tourism Authority iqoka iPhini likaMongameli omusha Wezokumaketha Nokuthuthukiswa Komkhiqizo
Abakwa-Airbus babika ukurekhoda ukulethwa nokudilivwa
Imininingwane emisha nge-Natural Killer Cell of Anti-Cancer...
Amazwe Abavakashi baseRussia basengavakashela
Inketho esebenzayo yokufakelwa kwesibindi somnikeli ophilayo...
Indlela Entsha Yokulwisana Nezifo Ezitholakala Esibhedlela Ngephampu
I-Air Transat yethula kabusha iningi lehlobo layo laseYurophu...
Okutholakele okusha kukhombisa ukudonswa kwamanzi kwemigudu yomoya ephezulu kunciphisa...
Umbiko Omusha: Ukhiye Wokudla Okunempilo Kwempilo Yesikhathi Eside
Umholo awuyona indaba: UMongameli waseZambia usebenza mahhala
Amasosha aseSri Lanka manje angakwazi ukudubula ngokuthanda kwakhe kulandela ...
I-Oman Air Iguqula Ukuhamba Kwezisebenzi Nge-Software Entsha
Mechanical Keyboard Market 2022 Abadlali Ababalulekile, SWOT...
Usayizi Wemakethe Yemikhiqizo Yokudla Ye-Global Non-GMO 2022 Global...
I-Global Bucket Loader Industry Analysis &...
I-Air Canada imemezela umbono ka-2022 ngalokhu...
I-GVB Iphinda Iqalise Isevisi Yamahhala ye-Guåhan Trolley Yezokuvakasha...
Akunjalo isiRashiya ngemuva kwakho konke: Izijeziso zisongela ukudilizwa ...
Ukuvakasha kwe-LGBT: Okuhle futhi Kunamandla
I-Australia ne-Netherlands: I-Russia kumele ikhokhele ...
Indiza entsha engami e-Seattle eya e-Tahiti
Ukulungela Manje Isikhathi Sokuvakasha Somndeni